ဟိုတယ်အရောင်းဆိုင်များရထားနဲ့ LED Track အလင်းများ - LED ကို Down Light က, LED ပြောက်အလင်း,,LED ကို Track အလင်း,LED ကိုရေလွှမ်းမိုးအလင်း,LED ကို Linear အလင်း,LED လမ်းအလင်းစက်ရုံထုတ်လုပ်သူ
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » ဟိုတယ်အရောင်းဆိုင်များရထားနဲ့ LED Track အလင်းများ
ဆီမီးခွက်အလင်းအား flux(LM) 3500
ဆီမီးခွက်အလင်းအားစွမ်းရည်(LM / w) 95
CRI (ထွက်>) 90
ထုတ်ကုန်အမည် ဟိုတယ်အရောင်းဆိုင်များရထားနဲ့ LED Track အလင်းများ
We areamanufacturer specializing in Aluminium housing & Aluminum heat sink for different LED lighting with different surface treatments and colors more than 10 နှစ်ပေါင်း.
We are also aluminum hardware factory located in Foshan city, welcom OEM & ODM ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, ငါတို့သည်သင်တို့၏နမူနာသို့မဟုတ် CAD / 3D အားဖြင့်ပုံဆွဲသည်နှင့်အညီထုတ်လုပ်နိုင်ဘူး.
Q1. နမူနာ သို့မဟုတ် CAD/3D ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။?
တစ်ဦးက: ဟုတ်ကဲ့, နမူနာ သို့မဟုတ် CAD/3D ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။, နမူနာ သို့မဟုတ် CAD/3D ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။.
Q2. နမူနာ သို့မဟုတ် CAD/3D ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။?
Q3. နမူနာ သို့မဟုတ် CAD/3D ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။? နမူနာ သို့မဟုတ် CAD/3D ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။?